I-LA Noire ibuyela kwi-PS4, iXbox One kunye noTshintsho ngoNovemba | Iindaba zeGajethi
Kubonakala ngathi uninzi lweenkampani zophuhliso lomdlalo wevidiyo zifumana umthambo omkhulu wentengiso (kwaye kutheni kungenjalo, ngexabiso eliphantsi) ekukhutshweni kwakhona kwemidlalo eyayinomtsalane ngokwenene ngexesha labo. Kanjalo Imidlalo yeRockstar ayivumeli ukuhamba kwexesha le- "retro" ngokubhekisele kwimidlalo yevidiyo.
Sineendaba ezimnandi zokukunika, iindaba eziya kuthi zigubungele onke amaqonga, into ekunzima ukuyiphumelela namhlanje. Kwaye kunjalo I-LA Noire izakufika kuninzi lweqonga lomdlalo wevidiyo ngenyanga kaNovemba, Kwaye into isixelela ukuba awuyi kufuna ukuyiphosa.
#LANOIREIifayile zeVR CASE zeHTC VIVE
Ukubonisana neemeko ezi-7 zakhiwe ngokukodwa ubunyani bokwenyani
Ukuza ngoNovemba 14 https://t.co/YMenbr87AE pic.twitter.com/i2Ts3vhgfr
Imidlalo yeRockstar (@RockstarGames) Septemba 7, 2017
Umdlalo ufike ngokusemthethweni kwizikhombisi zethu kungekho ngaphantsi kweminyaka emithandathu eyadlulayo. Zeziphi iindawo ekungafanelekanga ukuba zithethe kakhulu, kodwa sithetha ngemidlalo yevidiyo, kwaye Iminyaka emithandathu ayifutshane ncam. Ngesi sizathu, iMidlalo yeRockstar ithathe isigqibo sokuhlengahlengisa umdlalo wevidiyo kumaqonga akhoyo asivumela ukuba silonwabele ibali kwakhona. Ukuyibhengeza ukuba abafunanga zixhobo zininzi, enyanisweni kube ngumyalezo olula kwiakhawunti yabo ye-Twitter esemthethweni ebaleka njengogwebu, ngokuqinisekileyo i-LA Noire sele izakufika, kwaye iya kudibana nezihloko ezininzi esizilindeleyo. , iyakuchukumisa ukukrwela ipokotho.
Umdlalo wevidiyo uza kuza kwi-PlayStation 4 nakwi-Xbox One, kodwa ezona nguqulelo zinamandla kwezi consoles ziya kuba nakho ukusasaza nge4K. Utshintsho oluncinci lweNintendo luya kuwamkela lo mdlalo, nangona singazi ncam ukuba uza kuhamba njani nemizobo, ubuncinci kuTshintsho, kufuneka sitsho kolunye uhlelo abathe bagqabaza ngalo. Ngamafutshane, khange bafune ukuthetha ngamaxabiso, kodwa sicinga ukuba iya kuba phakathi kwe-30 kunye ne-39 ye-euro kwaye ngakumbi kwiifomathi zedijithali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Videogames » I-LA Noire ibuyela kwi-PS4, i-Xbox One kunye noTshintsho ngo-Novemba
USony utyhila iprojektha yayo ye-4K ngexabiso eliphakamileyo
Sijongisisa ithebhulethi Elements Terra 7 QCI